Safidy Dropbox tsara indrindra azonao andramana amin'ny taona 2020 - Lists
Safidy Dropbox tsara indrindra azonao andramana amin'ny taona 2020
Dropbox dia fantatra ho fitehirizana rahona malaza indrindra manerantany. Saingy, inona no hitranga raha lany ny habakabaka any ianao?Ary koa, naheno isika fa i Dropbox dia nanana bibikely vitsivitsy tao anatin'izay taona lasa izay nanimba ny kaonty an-tapitrisany.Mety hahazo ny kaonty premium manome toerana malalaka kokoa ianao, na afaka mampiasa fomba hafa soloinao Dropbox. Betsaka ny tranokala manolotra zavatra mitovy, ary angamba mety hanolotra fiasa tsara kokoa sy fiarovana aza.
Dropbox na safidy hafa hafa dia mamela anao hitahiry ireo rakitrao manan-danja amin'ny kapila rahona ary hampiasa ny iray amin'ireo rakitra ireo amin'ny PC hafa na finday avo lenta amin'ny alàlan'ny fidirana fotsiny.Raha mitady sehatra fitahirizana rahona ho Dropbox ianao eto, dia hanampy anao izahay.
Mitady Adobe Creative Cloud ho an'ny mpianatra? Zahao amin'ny lahatsoratray vao haingana.
Safidy Dropbox tsara indrindra:
CloudMe dia sehatra fitahirizana rahona mamela anao hamerina, hitahiry ary hizara rakitra amin'ny olona. Azonao atao ny mamindra mora foana ny datao rehetra avy any Dropbox mankany Cloudme amin'ny tsindry tokana. Rehefa misoratra anarana amin'ity sehatra ity ianao hamoronana kaonty dia hahazo tahiry 5GB maimaimpoana eo ho eo.
Fitehirizana maimaim-poana: 5GB
Pricing: miankina tanteraka amin'ny drafitra nofidinao
SugarSync dia safidy hafa amin'ny Dropbox izay azo ampiasaina hamindra na hizarana rakitra amin'ny fiarovana azo antoka. Rehefa mampiasa SugarSync ianao dia azonao antoka fa azo antoka sy azo antoka ny rakitrao.Mamela ny mpampiasa hampiakatra rakitra izy io ary koa ny fampirimana rakitra amin'ny alàlan'ny fitaovana isan-karazany ary koa fampitana multimedia.Azonao atao ny misintona ny app Supersync ho an'ny iOS sy Android amin'ny fivarotana app.
Fitehirizana maimaim-poana: Malalaka mandritra ny 30 andro
Pricing: 100GB amin'ny $ 7.49 isam-bolana, 250GB $ 9.99 isam-bolana, 500GB $ 18.95 isam-bolana
Team Drive dia safidy hafa amin'ny Dropbox izay ahafahanao mitahiry ireo rakitrao soa aman-tsara. Izy io koa dia manome serivisy backup. Mora be ny mampiasa azy.Azonao atao ny mampiasa azy handefa rakitra ato amin'ity sehatra ity na hizara izany amin'ireo mpiara-miasa aminao. Ity serivisy ity dia ilaina kokoa amin'ny tanjon'ny orinasa noho ny fampiasana azy manokana.
Fitehirizana maimaim-poana: 2GB
Pricing: 10GB manodidina ny $ 59,50 isan-taona
Mega dia serivisy fitehirizana rahona azo antoka izay manome anao tahiry manodidina ny 15GB maimaimpoana rehefa miditra ianao.Na dia tsy misy endri-javatra fanovana aza. Saingy, miaraka amin'izay koa, io dia iray amin'ireo sehatra mora indrindra sy mora indrindra azonao ampiasaina mba hitahiry soa aman-tsara ireo rakitrao ao anaty tahiry rahona miaraka amina drafitra vidiny mirary ihany koa.
Fitehirizana maimaim-poana: 50GB
Pricing: Miankina tanteraka amin'izay drafitra nofidinao
Mitovy amin'ny Dropbox, Sync dia mamela anao hampiasa sy hizara ny rakitrao amin'ny fitaovana rehetra amin'ny olona tianao hizarana ny rakitrao. Izy io dia manana endrika fiarovana matanjaka izay manome antoka fa ianao irery ihany no afaka miditra amin'ny angon-drakitra manan-danja.
Ny Sync dia ahafahanao mifehy ny fidirana amin'ny teny miafina, ny fampandrenesana, ny daty famaranana ary koa ny fahafaha mampakatra. Azonao atao ny mizara ny rohy fisie amin'ny olona rehetra hahafahan'izy ireo miditra amin'ny fisie ary ny zavatra tsara indrindra dia tsy mila manana kaonty Sync ny mpampiasa hahitana ireo rakitra.
Fitehirizana maimaim-poana: 5 GB
Pricing: $ 49 isan-taona amin'ny tahiry 500 GB na $ 96 isan-taona amin'ny tahiry 2 TB
Ny serivisy fitehirizana rahona pCloud dia manana mpampiasa manodidina ny 7 tapitrisa manerana an'izao tontolo izao. Hafa kely noho ny Dropbox izy io satria tsy mampiasa ny habaka fitahirizanao solosaina ny kinova desktop.Azonao atao ny mamindra ny rakitrao rehetra amin'ny tsindry tokana miaraka amin'ny rafitra mandeha ho azy.
Fitehirizana maimaim-poana: 10 GB
Pricing: miankina amin'ny drafitra fidinao
Zoho Docs dia iray amin'ireo fitehirizana rahona tsara indrindra izay azo ampiasaina ho solon'ny Dropbox. Izy io dia manana endri-javatra tsara toy ny fampidirana Dropbox, fampidinana betsaka, fampidirana mailaka, famantarana, fitantanana fidirana, tonian-dahatsoratra, sonia niomerika, ary maro hafa.
Pricing: Maimaimpoana ho an'ny vondrona misy mpampiasa hatramin'ny 25.Misy drafitra karama samihafa.
Box dia sehatra fitahirizana rahona lehibe ho an'ny ankamaroan'ny orinasa. Azonao ampiasaina mihitsy aza izany hampiasainao manokana.Manome anao manodidina ny 10GB eo am-piandohana izy ireo. Saingy, manana fetra fampidinana manodidina ny 250MB izy ireo.Tsy ho azonao atao ny mampakatra rakitra izay lehibe kokoa noho io habe io.
Pricing: Afaka misafidy 100 GB ka hatramin'ny fitehirizana tsy voafetra ianao. Miankina amin'ny drafitra ny vidiny.
CloudUp dia manamora ny fizotry ny fizarana rakitra eo anelanelan'ny mpandefa sy ny mahazo azy. Mamela anao mampakatra rakitra avy amin'ny horonan-tsary mankany amin'ny rohy ianao. Rehefa manapa-kevitra ny hizara rakitra vitsivitsy amin'ireo mpampiasa hafa ianao dia tsy mila mandefa azy ireo fotsiny ilay rohy.Ny ampahany tsara indrindra dia ny manome tahiry maimaimpoana betsaka ho an'ireo mpampiasa azy. Azonao atao aza ny manatsara ny drafitrao amin'ny kinova premium. Saingy, ny fitehirizana dia hitovy.
Fitehirizana maimaim-poana: 200GB
Pricing: afaka tanteraka
Raha mitady ny safidy Dropbox tsara indrindra ianao dia SpiderOak no mety indrindra aminao. Izy io dia fitehirizana rahona azo antoka sy azo antoka ary manome tahiry rahona mahatalanjona koa izy.Tokony hotadidinao fa ity tahiry rahona ity dia tsy hanome anao tahiry maimaimpoana.Ho an'ireo izay mitady fitehirizana rahona sy fitehirizana tahiry, ity no ho fitaovana tsara indrindra. Mora be ny mampiasa azy.
Fitehirizana maimaim-poana: Maimaimpoana mandritra ny 21 andro
Pricing: 150GB amin'ny $ 5 isam-bolana, 400GB manodidina ny $ 9 isam-bolana, 1Tb amin'ny $ 12 isam-bolana
Google Drive dia safidy Dropbox hafa izay malaza be. Samy Dropbox sy Google Drive dia noforonin'i Google. Google Drive dia safidy fitahirizana malaza kokoa ho an'ireo antontan-taratasy sy takelaka teo aloha.Raha efa mampiasa Google Drive ianao dia efa fantatrao fa afaka manova rakitra ao amin'ny Google Drive ianao. Ka io no tsy itovizan'ny Google Drive amin'ny hafa.
Ny na dia mamela anao hanome hevitra momba ireo antontan-taratasy aza ary mety hiara-hiasa amin'ireo mpampiasa hafa. Ankoatr'izay dia misy lafin-javatra lehibe iray hafa antsoina hoe kabary lahateny ho an'ny lahateny. Azonao atao ny mampiasa an'io endri-javatra io amin'ny fanoratana lahatsoratra amin'ny alàlan'ny feonao.
Fitehirizana maimaim-poana: 15GB
Pricing: 100 GB amin'ny $ 1,99 isam-bolana ary 1 TB $ 9.99 isam-bolana.
Onedrive dia fitehirizana rahona izay an'ny Microsoft. Io no vahaolana tsara indrindra ho an'ireo mpampiasa Microsoft. Raha tompon'ny Windows 10 PC na Laptop ianao, dia hapetraka mialoha ao amin'ny solo-sainao ny OneDrive.Rehefa manavao ny OneDrive amin'ny drafitra premium ianao, dia tsy hihary tahiry bebe kokoa fotsiny.
Saingy, mahazo fetra fampidinana lehibe kokoa koa ianao.Miaraka amin'ny drafitra premium, afaka mahazo fiasa manokana ianao izay misy ny Scanner PDF.
Pricing: Ny 50 GB dia $ 1,99 isam-bolana ary ny 1 TB dia manodidina ny $ 6,99 isam-bolana
Tany am-piandohana, serivisy fizarana rakitra fotsiny i MediaFire, fa taty aoriana dia nataon'izy ireo ho tahiry rahona ihany koa. Tsotra be ny fizarana rakitra sy lahatahiry. Tsy hafa noho ny ambin'ny serivisy io.Ny interface dia mora ampiasaina ary ho afaka hifehy ny drive fitahirizana avy amin'ny fitaovana rehetra ianao.
Fitehirizana maimaim-poana: 10GB
Pricing: Ny vidin'ny TB 1 dia $ 7.50 isam-bolana
Workzone dia rindrambaiko fitantanana tetikasa. Izy io dia manana fiasa sasantsasany izay tena ilaina amin'ny fitantanana rakitra, fitahirizana ary koa fizarana rakitra. Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny tanjona samihafa.Mamela anao hanome hevitra momba ny sary aza izy io. Ankoatr'izay dia ahafahanao mitazona ny fanovana rakitra rehetra.
Fitehirizana maimaim-poana: Tsia
Pricing: Mila mangataka ny vidiny ianao
Nextcloud dia tranokala fizarana rakitra hafa mihitsy izay mamela ny mpampiasa hizara rohy. Ny ankamaroan'ny orinasa madinidinika dia afaka mampiasa azy. Raha tianao ny tetikasa open source na azonao antoka ny laharam-pahamehanao, dia mety aminao ity fitaovana ity.
Fitehirizana maimaim-poana: Miankina amin'ny drafitra fidinao
Dropbox dia iray amin'ireo sehatra voalohany nahatonga ny serivisy fitehirizana rahona nilaina ho an'ny vahoaka.Ny olana lehibe dia ny fiasa fiarovana. Ny olona rehetra dia mitady fitahirizana rahona izay manome fiarovana sy fiarovana ny fisie.Misy safidy maro hafa azonao atao amin'ny teti-bola mora vidy ihany koa.
Cowboy Bebop Netflix vanim-potoana 2: Daty famoahana: voamarina amin'ny fomba ofisialy ve izany?
Famoahana ny vanim-potoana faha-4: nofoanana na havaozina amin'ny 2022?
ianao fantsona miova ho mp3
hijery ny manga sy ny fotsy amin'ny aterineto maimaim-poana
ny fomba hamafana ny kaontinao instagram maharitra
isan'ny fahitana avo indrindra amin'ny youtube
ny fomba fampidinana video avy amin'ny twitter